मैले चुस्दिन भन्दा झन दरो समातेर उसको लाडो मेरो मुखमा कोचार्नु भो - Nepali Sex Story - Naked Nepali Girl
Home » Nepali Sex Stories » मैले चुस्दिन भन्दा झन दरो समातेर उसको लाडो मेरो मुखमा कोचार्नु भो – Nepali Sex Story	मैले चुस्दिन भन्दा झन दरो समातेर उसको लाडो मेरो मुखमा कोचार्नु भो – Nepali Sex Story	December 24, 2016 Nepali Kt
2 Comments	” मैले चुस्दिन भन्दा झन दरो समातेर उसको लाडो मेरो मुखमा कोचार्नु भो – Nepali Sex Story ” Nepali youn katha, nepali sex stories, new nepali sex katha collection. nepali sexy maal lai chikeko kamuk katha, nepali youn kahani, latest nepali sex stories 2016, Real sex stories with picture.
म अर्चना ( नाम परिवर्तन गरिएको ) – म भर्खर १६ बर्ष को भएँ। केटा हरु देख्दा एक प्रकारको ईमोसन आउँछ। झन सर्टलेस केटाहरु देखेँ भने झनै ईमोसन आउँछ। ल सिधै स्टोरी तिर जाउँ है ! कुरा यही एस्·एल्·सी आगडी को हो। एक दिन साथी ले उसको ड्याड-मम् नहुँदा मलाई घरमा साथी दिनु भनेर बोलाई। म पनि घरमा भनेर साथीको घर गएं। साथी र उसको दाजु रहेछ घर मा। दाई चाहिँ गोल खेल्नु जानु भाको रैछ। मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ। साथी दोकान गकी थि भरै पढ्दा निन्द्रा लाग्छ भनेर चिप्स्हरु लिनलाई, म खाना बनाएर बसिराथेँ, दाई आउनु भो।
गर्मिले होला भेस्ट खोल्नु भाको थियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरेई भएछु, बडी एक्दम सेक्सी थियो। कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ। मैले आघि नै भने, अनि दाई नुहाउन लाई बाहिर कल म जानुभो। म झ्याल बाट हेरी रहेँ दाई नुहाएको, मलाई गएर दाईको शरीर रगड्न मन थियो तर के गर्ने मिलेन त्यसो गर्न, तेइ भएर हेरेरै चित्त बुझाएँ। दाई नुहाई सकेर भित्र आउनु भो अनि के हेरेको फुच्ची ! त्यसरी अरु नुहाको हेर्नु हुँदैन भन्नु भो। म त लाजले भुतुक्कै भएँ, अब के भन्ने भनेर। अनि म पनि के कम्, अरु नुहाको कस्ले हेरेको छ र ? तपाईं नुहाको पो हेरेको त ! दाईले टावेल मात्र बेर्नु भाको थियो अनि बडी भरि पानी को थोपा हरु, हेर्दै सेक्सी एन्ड हट देखिनु भाको थियो। त्यस्तो हेर्न मन भए रूममा आउ भन्नु भएर दाई रूम म जानु भो, मलाई के भो लाज नै हरायो र म पनि दाई को रूम मा गएँ। दाई छक्क पर्नु भो, जिस्केको पो त फुच्ची, तँ साच्ची आको भन्नु भो। म के भनुम भनुम भो अनि ढाटुवा ! भनेछु। त्यसपछि दाइले लु हेर फुच्ची भन्नु भो-अबुई! कत्रो रैछ दाइको त, रातो-रातो, लामो र मोटो। म त देखेर सीक भएछु।
त्यतिकैमा साथी पनि आई अनि दाईले अझै हेर्ने भा राती सुत्ने बेलामा आइज भन्नु भो। म बाहिरा निस्केँ। अनि साथीले खाना खाएर पढ्नु पर्छ भनेर छिट्टै खाना खाएम। मलाई दाई को आगाडी कस्तो लाज लाई रा थ्यो। हामी खान्- पिन् सकेर पढ्न बसेम्, मेरो ध्यान दाई कै शरीर को अङ्ग अङ्गमा गैराको थियो, पढ्नु नै मन लागेन ।साथी कति खेर सुत्छ र मलाई दाई को मा जाउँ जाउँ भाको थियो। रात को त्यस्तै १० बज्यो अनि साथीले अब सुतुम भनि। मलाई क्या खुशी लाग्यो अनि साथी सुती र म दाईको रूम मा गएँ। दाई चुरोट तान्दै बसिराख्नु भाको रैछ। म आए पछि रिसाउँदै कति ढिलो आको भन्नु भो। तँलाई वेट गर्दा गर्दा १ प्याकेट चुरोट सिद्दियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त दाइको शरीर तिर मात्र ध्यान दिँदै थिएँ, साँचीनै धेरै चुरोट खानु भएछ। चुरोटका ठुटाहरु टन्नै थियो टेबलमा। आईज बस् भन्नु भो, मलाई अफ्ट्यारो लाग्यो। किन लजाउँछस् भनेर तानेर हग गर्नु भो। त्यो नाङ्गो बडी मा हग गर्दा तातो फिल भो मलाई। अनि बिस्तारे किस गर्न थाल्नु भो। मेरो पनि लुगा खोलेर आफु जस्तै नाङ्गै बनाई दिनु भो। अनि मेरो कपाल समातेर मेरो मुख उसको लाडोमा दल्नु भो । मैले के गर्नु भाको यस्तो भन्दा – चुसाउन लागेको, मजाले चुस पो भन्नु भो।
मैले चुस्दिन भन्दा झन दरो समातेर उसको लाडो मेरो मुखमा कोचार्नु भो। भरै त मलाईनी मजा आयो, मैले नै दाइको लाडो समातेर चुस्न थालेँ। दाईले मेरो दुधको टुप्पो चिमोट्दै दुध माड्-मुड गर्न थल्नु भो। म कामुक हुन थालेँ, झन जोड्-जोड्ले माड्-मुड गर्न थल्नु भो। म बेहोसी झैँ भै सकेको थेँ। झन् दाइले मेरो पुती सुम्सुमाई दिँदा त म सल्याक्कै भाको थेँ। दाई ले मलाई हग गर्दै बेड मा पल्टाउनु भो अनि म माथी चढेर मेरो खुट्टा फ्याँ पारेर दाई ले उसको लामो-रातो-मोटो लाडो मेरो सानो पुती मा जबरजस्ती छिराउनु भो। मैले आइया! भनेर काराएछु दाइले मेरो मुख उसको एउटा हातले छोपेर चिक्न थाल्नु भो। एक्दम वाइल्ड वे बाट। ब्लड नि निस्कियो। त्यसपछि मलाई घोप्टो पारेर पछाडी बाट चिक्न थाल्नु भो, मेरो चाक पड्काउदै। चाक रातै हुने गरी पड्काउनु भएछ तर पनि मज्जा आउदो रैछ।
त्यस्तै ३० मिनेट पछि लाडो निकालेर कपाल समातेर मेरो मुखमा लाडो छिराउनु भो। म त फेरी चुसाउनु आट्नु भएछ भनेको थिएँ। एकछिन् सम्म लाडो मेरो मुख मा राख्नु भो। मलाई सास फेर्न नि अफ्ठेरो भैरा थियो, एकछिन् मा त तातो भो मुख। दाईले मेरो नाक नि बन्द गरिदिनु भो। नाक बन्द भएपछि त त्यो तातो पानी सब निलेछु। अनि मात्र मुख बाट लाडो झिक्नु भो, अनि हाँस्दै कस्तो रैछ टेस्ट भन्नु भो। मलाई त डर लाग्यो अब के हुन्छ होला भनेर। अनि दाई ले हग गर्दै केहि हुँदैन फुच्ची भन्नु भो। हामी एक्-अर्काको चुस्दै खेलाउँदै निदाए छौँ। बिहानको ३ बजे मात्र बीउँझिएँ अनि मेरो लुगा बोकेर के निस्किनु लागेको फेरी दाईले समातेर राती झैं गर्न थाल्नु भो अनि फेरी मुखमा झारेर दाई सुत्नु भो अनि म चाहिँ लुगा लगाएर साथी को रूममा आएर सुतेँ।
लाईफ को पहिलो सेक्स साथी को दाई सँग मज्जा आयो। बिहान उठेर, चिया खाजा खाएर साथीले नै उसको दाईलाई भनेर मलाई घर सम्म पुराई दिनु भो। बाटोमा मिठो मिठो गफ गर्दै, छिल्लींदै, एक अर्कालाई चिमोट्दै मेरो घर अगाडि पुगेम। हामी दुबैले फोन नम्बर साटासाट गरेम अनि एउटा मिठो किस का साथ् एस्·एल्·सी पछि भेट्ने भन्दै छुटिएम। एस्·एल्·सी पछिको कहानी चाहिँ अर्को चोटी यो कथा मन पराउनु भयो भने है त ! कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।
Previous post: Indian Horny Housewife Masturbating Hairy PussyNext post: Nepali Girl Sucking Big Erected Dick
tulsi says:	December 27, 2016 at 12:47 pm	mero lagi chha koi kt…
tulsi says:	December 27, 2016 at 12:48 pm	archana ma sanga garne ho